Ufuna Indlela Bhala Incwadi ukuba umhleli ukugqamisa izinkinga emgwaqweni nemigwaqo uhlangabezana amanzi egawula ngesikhathi inkathi yezimvula ezinkulu? Lapha esiyikho nge Incwadi ukuba umhleli ngezinkinga amanzi egawula ngesikhathi yezimvula isizini emadolobheni kamasipala efana Delhi.
I-Times of India
Isihloko- Eqokomisa ngezinkinga amanzi egawula e Delhi ngesikhathi yezimvula isizini
Ngokusebenzisa iphephandaba lakho Tikhulu Ngifuna kudonse iziphathimandla ukukhathazeka maqondana inkinga yamanzi egawula e Delhi phakathi zonke inkathi yezimvula ezinkulu.
Kwaba kancane kuxaka ukubona izingxenye ezitaladini eziningi nemigwaqo Delhi kokuba amanzi nje ngemuva kwamahora ambalwa sezimvula ngakanye izinsuku ezimbalwa edlule. Lokhu kubonisa nenkinga enkulu isimiso sokukhuculula emzini. Delhi uthola izimvula kanje kuphela amasonto ambalwa ngonyaka ngesikhathi njalo ngenyanga. Kodwa noma kunjalo edolobheni wayengasenakukwazi ukubekezelela ke. Isimo engangibhekene naso okubi ikakhulukazi imigwaqo ngezansi ezinye flyovers. Abashayeli abaningi kwadingeka bayeke izimoto zabo ngemuva kokuba balahleke amachibi amanzi. Waterlogging libhekisela saturation inhlabathi ngamanzi. Lapho imigwaqo emisha Kwakhiwa, ikakhulukazi ezindaweni ongaphakeme-amanga, kubalulekile ukuthi amanzi ohlelweni efanele wenziwe ukuze amanzi ngokushesha likhanyelwe uma imvula. Njengoba eliyinani dolobha India, kuba incongruous ukubona migwaqo enezikhukhula ngemva kokuba neziqubu imvula.
Minyaka yonke izimvula esindayo ukwenza ezinye izingxenye ezithile zedolobha isifo waterlogging. Ingqalasizinda amanzi emvula, uma ikhona ngaso sonke, alanele ukuze kuqinisekwe ukuthi amanzi amanzi ukuze ezitaladini ezisezindaweni eziphansi amanga get ukhungethwe. Imigwaqo ivaliwe okuholela isiminyaminya, abahamba ngezinyawo kufanele angene emigwaqweni enezikhukhula, ikakhulukazi labo abahlwempu ezisemadolobheni, abahlala emijondolo noma emikhukhwini baye emakhaya abo ngokuvamile kabana amanzi, okuyinto kungathatha izinsuku ezimbalwa ukuthi amanzi anciphe. Kodwa waterlogging kwenzeka yonke indawo, kungakhathaliseki ukuthi ezicebile noma omakhelwane abampofu. umbiko wesimo sezulu Njalo iphephandaba nyaka unolwazi mayelana usuku oluqondile lapho imvula Kulindeleke ukuthi kuqale izinhlelo futhi ukuthi inkathi yezimvula ulilethele ngaphezulu noma imvula esingaphansi kweminyaka phambi naphezu ukuthi iziphathimandla ukhathazekile kuhlulekile ukuphatha isimo.
FUNDA FUTHI: Top 6 Amathiphu On Indlela Bhala The Best Indzaba
MCD sethu izinsiza ngokwanele ukuba uphathe isimo, kodwa udoti okungafanele ulahla ngumphakathi futhi ukwehluleka MCD ingenye sezizathu esiyinhloko indle ukubanjwa ligcwele udoti okwenza kukhule amanzi egawula. Ngenxa waterlogging abantu kufanele abhekane eziningi izinkinga ezifana izingozi zomgwaqo ngisho ebangela ukufa ngezinye izikhathi, Jams Traffic, ukwandisa omiyane nokunye. Sithemba ukuthi Wezemisebenzi Yomphakathi Authority kuzothatha inkinga yamanzi egawula sina futhi zamukele imikhuba emisha futhi izinyathelo zokuvimbela ukuba izinkinga ezinjalo esikhathini esizayo.
ISIHLOKO IZIHLOKO FOR yalombhalo
« Top 8 Umsebenzi Izinketho nge Imiholo Ophambili eNdiya
Sosuku Lwengculazi Lomhlaba Wonke – Disemba 1, 2017 : Indzaba, Theme, iziqubulo, Izilinganiso, imilayezo, Indlela Gubha, Inkulumo »